जसरी हाम्रो लेख, सत्सङ्ग के हो, मा स्पष्ट गरेको छ, सत्सङ्गको अर्थ हो, सतको संग अर्थात सतमा रहनु। हामी विविध माध्यहरुबाट सतको सान्निध्यमा रहन सक्छौं । यहाँ सत्सङ्गको विभिन्न प्रकार दिएका छन् ।
२. ईश्वरको साथ सत्सङ्ग
साधना नगर्ने व्यक्ति दुखमा मात्र ईश्वरलार्इ स्मरण गर्छ तथा र्इश्वरसँग कुरा गर्छ । आध्यात्मिक पथमा अग्रसर व्यक्ति केवल कठिन समय मात्र होइन आफ्नो जीवनको प्रत्येक क्षण ईश्वरको साथमा बिताउछ । उनी ईश्वरलार्इ अफ्नो प्रत्येक त्रुटि एवं आन्तरिक विचार बताउछ । यस्तो साधकलार्इ केही कालावधि पछि यस्तो अनुभव हुन्छ कि उनलार्इ अन्तरमनबाट उत्तर प्राप्त हुन थालेको छ । जसरी-जसरी उनको साधना बढ्दै जान्छ, उनी निरन्तर ईश्वरको सान्निध्यमा रहने प्रयास गर्छ । ईश्वरसँग कुराकानी ईश्वरको साथमा सत्सङ्ग बराबर जस्तै हो अनि यो सत्सङ्ग सर्वोच्च स्तरको हो ।
३. सन्त, गुरु एवं उन्नत साधकको साथ सत्सङ्ग
तीव्र आध्यात्मिक प्रगतिको लागि, हामी निरन्तर उन्नत साधक अथवा आफ्नो आध्यात्मिक मार्गदर्शकको सत्सङ्गमा रहनु पर्छ । सत्सङ्गबाट प्राप्त फार्इदा बाहेक, हामीलार्इ दोष निवारणको अवसर प्रदान गर्छ, साधनामा सुधार हुन्छ तथा साधनामा आउने अवरोध निर्मूलनको लागि मार्गदर्शन प्राप्त हुन्छ ।
हामीसँज बिताएको उन्नत साधकको समय खर्च नहोस भनेर सत्सङ्गको पूर्व नियोजन गरि खास लक्ष्यहरु हासिल गर्नुपर्छ । उदाहरणाको लागि, कुनै उन्नत साधकसँग भेट गर्नु पहिला नै दिन अनि समय सम्बन्धि योजना बनाउनु पर्छ । यसको लागि आफ्नो अनुभूति, बाधा, प्रश्न एवं साधनामा भर्इरहेको प्रगति सम्बन्धि सूत्र इत्यादि लेखेर राख्नु पर्छ ।
उन्नत साधकको साथ कुराकानी गर्दा अथवा उनको सान्निध्यमा रहदा जुन सूत्र एवं अन्तरनिहित सिद्धान्त सिक्छौं, ती सबै लेख्नु पर्छ । साथै आचरणमा उतारनको लागि प्रयास गर्नु पर्छ । कुनै विशेष घटना अथवा कुराकानी कुनै सिद्धान्तलार्इ राम्रोसँग व्याख्या गर्नको लागि सहायक हुन्छ, त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्त बुझ्नको लागि हाम्रो विशेष ध्यान हुनु पर्छ । उदाहरणार्थ, यदि उन्नत साधक टेलिफोन सफा गरि योग्य तरिकाले राख्ने उदाहरण दिन्छ भने त्यस उदाहरण बाट स्वच्छता अनि परिपूर्णता सिद्धान्त, आध्यात्मिक अभ्यासको एउटा भार्ग सम्झेर गर्नुपर्छ । हामीले यो पनि जान्नु पर्छ कि यो सिद्धान्त केवल टेलिफोनमा मात्र सिमित नभएर सबै स्थानमा लागू गर्नुपर्छ । हामी जे जति सिक्छौं अथवा हामीलार्इ जुन मार्गदर्शन प्राप्त हुन्छ त्यसलार्इ आचरणमा ल्याउने प्रयासको नियोजन गर्नुपर्छ, किन कि अभ्यास विहीन ज्ञान व्यर्थ छ ।
उन्नत साधकको सत्सङ्गमा रहँदा प्रत्येक समय आफ्नो अनुभव लेख्नुहोस् । उदाहरणार्थ, नामजपको मात्रा अथवा गुणस्तर बढेर जानु, नसोध्दा पनि शङ्काकको समाधान हुनु, शारीरिक रोग, जस्तै पीठको वेदना बिना उपचारनै कम अथवा हराएर जानु, कुराकानी पश्चात व्यक्तिगत अनुभव कस्तो रहयो – राम्रो, नराम्रो अथवा तटस्थ (neutral), किन कि साधनाको उद्देश्य हो आनन्द प्राप्ति, सत्सङ्गबाट आनन्दको अनुभूतिमा वृद्धि हुनु पर्छ । यदि यस्तो भर्इरहेको छैन भने विश्लेषण गर्नुपर्छ, मबाट के गल्ति भर्इरहेको छ तथा फेरि नदोहरियोस् त्यसमा ध्यान दिनु पर्छ । इसको विपरीत, यदि राम्रो अनुभूति भर्इरहेको छ भने के सहि गरयो त्यसको विवेचन गर्नुहोस् अनि भविष्यमा त्यसैमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् ।
४. सह-साधकको साथ सत्सङ्ग
यो स्थूल (शारीरिक) स्तरमा, टेलिफोन अथवा वेबसाइटको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ । SSRF विश्व भरमा आफ्नो साधकको लागि अंग्रेजी एवं अनेक यूरोपियन भाषाहरुमा नियमित सत्सङ्गहरुका आयोजन गर्दछन् । साधक विश्वको विभिन्न भागमा रहन्छ, त्यसैले Skype को माधयमबाट सत्सङ्ग सञ्चालन हुन्छ । सत्सङ्गमा आध्यात्मिक विषयको चर्चा तथा साधनासँग सम्बन्धित शङ्काको समाधान गरिन्छ ।
सह-साधकको साथ व्यक्तिगत स्तरमा अथवा टेलिफोनमा आध्यात्मिक चर्चा पनि एक प्रकारको सत्सङ्ग हो ।
सत्सङ्गमा चर्चा गरिने विषय अनुसार वर्गीकृत गर्न सकिन्छ –
सूचनात्मक सत्सङ्ग – अध्यात्म सम्बन्धि जानकारी दिने एवं चर्चा गर्ने ।
मार्गदर्शक सत्सङ्ग – यो सत्सङ्गमा व्यष्टि साधना एवं प्रसार सम्बन्धि मार्गदर्शन गरिन्छ ।
भाव सत्सङ्ग – सहभागी साधकमा भाव वृद्धि गर्नको लागि गरिने सत्सङ्ग ।
५. सन्तद्वारा लिखित धर्मग्रन्थ पढ्नु
यो एउटा यस्तो सत्सङ्ग हो, जहाँ साधक पुस्तकमा अंकित शब्दको माध्यमबाट चैतन्य ग्रहण गर्दछ । यो यस कारण हुन्छ कि ग्रन्थको लेखक सन्त हुनुहुन्छ अथवा उच्च आध्यात्मिक स्तरको जीवात्मा हुनुहुन्छ, जसको सङ्कल्प शब्दबाट कार्यरत हुन्छ । SSRF को अनेक साधकहरुले आफ्नो अनुभव बताएका छन् कि मात्र यी ग्रन्थका नजिक हुँदा उनीहरुलार्इ स्वयंमा आध्यात्मिक उपचार भएको अनुभव हुन्छन् ।
६. सत्सङ्गको अन्य प्रकार
आध्यात्मिक प्रवचनमा सम्मिलित हुनु
धार्मिक स्थल जस्तै, गिरिजाघर, मन्दिर, सन्तको आश्रम इत्यादि का दर्शन
तीर्थ स्थलमा रहनु
भक्ति गीत सुन्ने अथवा गायन
अब हामी, सतको सङ्गमा रहनको लागि, सत्सङ्गको विभिन्न माध्यमहरु तथा सत्सङ्ग हाम्रो आध्यात्मिक प्रगतिको लागि महत्त्व छ भनेर सचेत भएका छौं, त्यसैले हामी निरन्तर सत्सङ्गमा रहि सत्सङ्गको लाभ उठाउने प्रयास गर्नु पर्छ ।